के तपाई स्मार्टफोन किन्दै हुनुहुन्छ ? यि कुरामा ध्यान दिनुहोस्
सोमबार, १२ चैत, २०७४
अहिले स्मार्टफोनको बजार आकाशिएको छ । हरेक महिना दर्जनौ नया मोडलका स्मार्टफोनहरु आइरहेका छन । मानिसहरु पनि आफ्ना आवश्यक्तासगै नया विशेषताका उत्कृष्ट फोनहरु बोक्न लालगित भएका देखिन्छन । दशै तिहारको मौसममा त स्मार्टफोनको बिक्री धेरै हुन्छ । कहिलेकहि अरुको लहैलहैमा लागेर वा नबुझेर पनि मोबाइल किन्दा ठगिन सक्नुहुन्छ । आफुलाइ चाहिने र रकमको जाहो हेरेर तपाइले आफै राम्रो मोवाइल छान्न सक्नुहुनेछ । हामिले केहि जानकारीमुलक सामग्री यहाँ प्रस्तुत गरेका छौ ।
फोन खरिद गर्दा जान्नै पर्ने मुख्य ३ कुराहरु
१. खरिद गर्न चाहेको फोनका विशेषताहरु थाहा पाउँनुहोस्
तपार्इँले चाहेको फोनका विशेषता र क्षमताका बारेमा जानकार हुँनुहुन्छ भने नचाहेका वा आवश्यक नपरेका विशेषताका लागि ठूलो रकम खरिद गरिरहनु पर्दैन । जस्तो सामसुङ ग्यालेक्सी नोट एजमा सबै कुरा छन्– घुमाउरो स्क्रिनका साथै यसको आफ्नै इन्टरफेस र न्याभिगेसन कन्ट्रोल रहेको छ । तर तपाईँ यसमा रहेको पेन वा नयाँ युआइ प्रयोग गर्नुहुन्न भने यो मंहगो फोनमा धेरै खर्च गनुहँदैछ ।
२. उपयुक्त डिजाइन रोज्नुहोस्
बाजारमा थरि–थरिका डिजाइनमा फोनहरु आएका छन् । तपार्इँ त्यस्तो डिजाइन छान्नुस् जुन तपार्इँको व्याक्तिगत स्टाइललाई समेत सुहाउँदिलो होस् । फोनमात्र त्यस्तो साधन हो जुन हामीले जहाँ जाँदा पनि आफूसँगै बोकेर लाने गर्दछौँ । य ेसँग तपाईँले आफ्ना महत्वपूर्ण क्षणहरु विताउँनुहुने भएकाले डिजाइनमा पनि विशेष ध्यान दिनुस् ।
३. धेरै सस्तोको पछि नलाग्नुस्
धरै सस्तो फानको पछि नलाग्नुस् । आफूले किन्न सक्ने फोन लिएको राम्रो । किनीसकेपछि केही लामो समयसम्म टिक्ने फोन किन्दा नै बेस हुन्छ । संभव भएसम्म फोनको अर्को अपग्रेड नआउन्जेल काम गर्ने गुणस्तरिय क्यामेरा र प्रोसेसर भएको लिनुपर्छ । त्यसैगरी ब्याट्रीको क्षमता पनि हेनुहोस् ।
उच्च क्षमताका फोनहरु जस्तो आइफोन सिक्स वा सामसुङ एस फाइभ किन्ने सोचमा हुँदा सुरुमा महंगो लागे पनि यिनीहरु तपार्इँले लामो समय साथमा राख्न सक्नुहुनेछ । समयसँगै यिनमा लगानी गरेको प्रतिफल पनि अवश्य दिने गर्दछन् र वषैँसम्म राम्रोसँग चल्दछन् ।
आजका दिनहरुमा फोनहरुमध्ये स्मार्टफोन सबैभन्दा बढी चर्चा, चासो र रोजाईको विषय बनेको छ । यस्ता फोनहरुमा सबैभन्दा शक्तिशाली क्षमता र उच्च स्तरका कम्पोनेन्टहरु राखिएका हुन्छन् । द्रुत गतिको प्रोसेसर, वाइफाइ, तस्विरमा उच्च रेजुलेसन, ठूलो मेमोरी क्षमता र उच्च पिक्सल भएका स्क्रिनहरु स्मार्टफोनका विशेषताहरु हुन् । यिनीहरुमा आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम जस्तो आइओएस वा एन्ड्रोइड हुनेगर्दछ । यस्तैमा विन्डोज फोन र ब्लाकबेरी ओएस पनि अपरेटिङ सिस्टमको रुपमा आएका छन् । यस्ता उच्च क्षमता र फरक विशेषताका कारणले स्मार्टफोनहरु धेरै महंगा हुने गरेका छन् ।
म्यासेजिङ वा फिचर फोन
स्मार्टफोनभन्दा एक कदम पछाडि रहेका फिचर फोनहरुले पनि स्मार्टफोनमा पाइने धेरै कुराहरु अटाएको छन् । स्मार्टफोनमा हुँने लोकप्रिय अपरेटिङ सिस्टमहरु नभएपनि उत्पादक कम्पनी विशेषका सफ्टवेरहरु रहेका हुन्छन् । सामसुङ, एलजी लगायतका उत्पादक कम्पनीहरुले फिचर फोनहरु उत्पादन गर्दै आएका छन् । धैरै जसो फिचर फोनहरु मुख्यतयः टेक्स्ट म्यासेजिङ र इ–मेलका लागि प्रयोग गरिन्छन् । स्मार्टफोनको तुलनामा सस्तो र धैरै कम मात्रामा रहेका छन् ।
के के छन परिस्कृत नयाँ स्मार्टफोनका फिचरहरु ?
शनिबार, २४ चैत, २०७४